गरेको पनि स्यान्डविच कुरा गरौं। जो यो थियो, तर तिनीहरू दृढ हाम्रो दैनिक जीवनमा मूल लिएको। र पनीर संग सैंडविच र ससेज यदि यो केही सामाग्री संग पूरक र सजाउनु छ, एउटा द्रुत खाजा लागि, साथै उत्सव तालिका लागि राम्रो छ।
को स्यान्डविच के हुन्?
स्यान्डविच मात्र हुन सक्छ चिसो खाजा। तिनीहरूले एक माइक्रोवेव वा ओवन प्रयोग गरेर तातो गर्न सकिन्छ। यस मामला मा, यो आफ्नो स्वाद पनि परिवर्तन भएको छ। ससेज र पनीर संग तातो स्यान्डविच सधैं दरवाजे मा, जब अतिथि, तिनीहरूले भन्न रूपमा उद्धार गर्न आएको, र तपाईं आफ्नो आगमन लागि तयार छैनन्।
र यस्तो संग तातो खाजा , तपाईं चाँडै तालिका धेरै प्रयास बिना सेट गर्न सक्नुहुन्छ। र अतिथि पक्कै छैन भोक जानेछ।
ससेज र पनीर संग ओवन मा सैंडविचेस
1 आवारागर्दी ~।
ससेज (प्राथमिकताको धूम्रपान) - 100 ग्राम
मेयोनेज र केचप।
मक्खन (पैन चिल्लो गर्न) - '30
greased, को आवारागर्दी ~ कटौती, एक पाक पानामा आफ्नो टुक्रा बाहिर फैलियो। ससेज एक मध्यम grater मा स्लाइस र पनीर दल्नु मा कटौती। मेयोनेज र केचप मिश्रण, सस प्राप्त। तिनीहरूलाई रोटी धब्बा, को ससेज माथि राख्नु, र त्यसपछि यो चीज सबै राम्रो छर्कनु। हामी पाँच मिनेट लागि ओवन मा स्यान्डविच पुऱ्याउन (200 डिग्री को एक तापमान यसलाई पूर्व-हीटिंग)।
स्यान्डविच लागि थप सामाग्री
पनीर र ससेज संग एक सैंडविच बनाउन, तपाईं एक पूर्ण बिभिन्न sausages प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ: उसिनेर, धूम्रपान, धूम्रपान।
र आफ्नो तरकारी, जडीबुटी, जैतून, जडीबुटी र मसाले पूरक गर्न नबिर्स। छुट्टी तालिका मा एक सुन्दर भोजन फाइल, सलाद संग garnish पहिलो छोड्छ, त्यसपछि हामीलाई स्यान्डविच, जो मुला देखि गुलाब बीच राखिएको गर्न सकिन्छ, ककडी र टमाटर सलाद मरिच को स्लाइस बताउनुहोस्। र यो सबै हरियो घुम्रेको साग र जैतून सजाउनु माथि। उज्ज्वल र सन्तोषजनक पकवान प्राप्त गर्नुहोस्।
तपाईं नि: शुल्क आफ्नो विकल्प असीमित नम्बर संग आउन छन्, तपाईंको पाक कल्पना जंगली चलान दिने।
को माइक्रोवेव बाहिर सैंडविचेस
हामी तपाईंलाई कसरी बनाउने लागि अर्को ठूलो नुस्खा बताउन चाहनुहुन्छ तातो स्यान्डविच ससेज र पनीर संग। यो टोष्ट लागि तयार-कटा रोटी किन्न राम्रो छ लागि। आवश्यक उपकरण को कुनै पनि? यो कुरा छैन! प्रत्येक टुक्रा तेल कराइ मा दुवै पक्षले हुनेछ, र भुट्नु। यहाँ हाम्रो टोष्ट र तयार छन्। अब हामी पनीर को ठूलो hunk हरेक टुक्रा मा राखे। उहाँले आकार रोटी जस्तै हुनुपर्छ छ। सामान्यतया यी स्यान्डविच लागि निर्वात-पैक मा एक तयार कटा पनीर प्रयोग गर्न राम्रो छ। त्यसपछि शीर्ष मा sausages राख्नु, र पनीर को त्यसपछि अर्को टुक्रा। सबै अब सम्भव हाम्रो टोष्ट पठाउन छ ओवन मा केही मिनेट लागि। पनीर oplavitsya पूर्ण ससेज enveloped। यो धेरै स्वादिष्ट बाहिर जान्छ।
ससेज र पनीर र अन्डा संग ओवन मा सैंडविचेस
तयारीको लागि हामी आवश्यक:
1 ठोस SYR 200 ग्राम
2. पकाएको ससेज - 250 ग्राम
3. प्याज - 1 पीसी।
4 अन्डा -5पीसी।
5 ब्याटन, केचप।
एक भद्दा grater मा सोडियम पनीर, को diced ससेज, अन्डा, प्याज र जडीबुटी यसलाई थप्न। अन्डा यो crumbling देखि राख्न वजन सुरक्षित गर्न आवश्यक छ। यी सबै सामाग्री मिश्रित र कटा आवारागर्दी ~, केचप संग गंदा को स्लाइस मा फैलाउन छन्। त्यसपछि एक पाक पानामा तिनीहरूलाई दुई वा तीन मिनेट 200 डिग्री मा एक ओवन मा फैलाउन र heats स्यान्डविच।
गाजर संग सैंडविचेस
मानक व्यञ्जनहरु को थकित? कृपया, प्रयोग, परिवर्तन, आफ्नै को कुरा ल्याउन। तपाईं पनीर र ससेज संग एक हट सैंडविच कसरी विस्तार गर्न थाहा छैन? गाजर थप्न प्रयास गर्नुहोस्। हामी उत्पादनहरु आवश्यक:
ब्याटन - 1 पीसी।
क्रिम चिज -2पीसी।
प्याज - तीन।
हामी एक आवारागर्दी ~ कटौती गर्नेछ, अंगीठी गाजर, ससेज र पनीर। प्याज सफा र घन मा कटौती। त्यसपछि गाजर र प्याज सूर्यमुखी तेल मा एक सानो भुट्नु आवश्यक छ। गहिरो तला ठूलो, पनीर र ससेज जडान। र केचप र मेयोनेज थप्नुहोस्। सबै राम्रो तरिकाले मिश्रित छ। आवारागर्दी ~ को परिणामस्वरूप मिश्रण smazhem स्लाइस। र राख्न एक हट ओवन मा स्यान्डविच पन्ध्र मिनेट। समाप्त खाजा कटा जडीबुटी संग छिडकना गर्न सक्नुहुन्छ।
घर बर्गर लागि नुस्खा
पनीर र ससेज र एउटा सानो साथै संग - घरमा छोराछोरी खुसी गर्न, तपाईं असामान्य सैंडविच पकाउन गर्न सक्नुहुन्छ। अब बिना अपवाद keen "McDonalds" छोराछोरी। र तपाईं तिनीहरूलाई ह्यामबर्गर वा Cheeseburger घर पकाउन सक्छ किनभने - पक्कै पनि तिनीहरू बढी उपयोगी र स्वादिष्ट, तिनीहरूले आफ्नै बनाउन भने, बरु छिटो खाना खरीद को हुनेछ।
सामान्यतया, Cheeseburger - यो नै ह्यामबर्गर मात्र पनीर संग छ। यो संघटक को यो यति रुचाउनु छ किनभने यो छ। र वास्तवमा यो ससेज र पनीर (लेख मा प्रस्तुत फोटो) संग सामान्य सैंडविच, अलिकति फरक सजाया छ। यो खाजा के हो? यो ससेज, पनीर, तरकारी र साग राख्नु जो रोटी, कट। यो सबै गर्न र सबै भन्दा सजिलो छ।
त्यसैले, तयारीको लागि हामी आवश्यक:
1 रोल्स -4पीसी।
2. ससेज (धूम्रपान वा उसिनेर) - 400 ग्राम
3. केचप, मेयोनेज।
4 खीरे, टमाटर, प्याज, नुन।
, आधा रोल कटौती मेयोनेज तिनीहरूलाई फैलियो। भित्र प्रत्येक प्याज छल्ले, ककडी, पात सलाद को प्लेट, राख्नु र माथि ससेज र पनीर को एक राम्रो टुक्रा राखे। अर्को, यो सबै केचप र दोस्रो आधा रोल संग कवर पोख्नुहोस्। हाम्रो साथ यहाँ र म घर मा एक Cheeseburger प्राप्त। तपाईं संरचना परिवर्तन र मशरूम, खुर्सानी, जैतून मा थप्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं ओवन र माइक्रोवेव पनि माथि न्यानो समय छैन भने, कुनै - यो दुखी हुन एउटा कारण छ। यो एक पैन मा ससेज र पनीर संग रोस्ट स्यान्डविच गर्न पूर्ण स्वीकार्य छ। तपाईं प्राप्त एक स्वादिष्ट खाजा, समान र पिज्जा र omelette।
अन्डा -5पीसी।
Baguette आधा कटौती। हामी छेउमा कटौती बनाउन। प्याज काट्नु र अन्डा, seasonings र ससेज संग मिश्रण। एक कराइ अप न्यानो र हाम्रो मिश्रण Spill। को आमलेट baguette खुला माथि राख्नु र यो समतल। भुट्नु कोमल सम्म कम गर्मी मा आवश्यक। त्यसपछि, यो सबै हटाउन पत्ता लगाउन र पनीर मा राखे, र त्यसपछि यसलाई फेरि चीज पगाल्न पैन मा केही मिनेट बन्द गर्नुहोस्।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा लागि स्वादिष्ट स्यान्डविच को तयारी असाधारण पाक कौशल छैन। तिनीहरूले हात मा छ वस्तुतः के बाट धेरै चाँडै तयार छन्। र किनभने अक्सर तपाईं चाँडै केहि स्वादिष्ट र सन्तोषजनक पकाउन आवश्यक जब बचत गर्नुहोस्। पेश व्यञ्जनहरु मध्ये एक मा आफ्नै स्यान्डविच तयार प्रयास गर्नुहोस्, र तपाईंले यसलाई सबै भन्दा महत्वपूर्ण चाँडै र सजिलै गरिन्छ कसरी र देख्नुहुनेछ - यो स्वादिष्ट बाहिर जान्छ!
मेहनत उसिनेर अन्डा कसरी खाना पकाउनु
साक्षरता अभियान: boletus कसरी खाना पकाउनु?
कसरी मशरूम र तरकारी संग multivarka मा अनाज खाना पकाउनु
लियोनिद Diachkov जीवन र सोभियत अभिनेता को मृत्यु
गरेको Mangalia कुरा गरौं। Collapsible brazier।
कसरी कटौती संग रक्तस्राव रोक्न: कार्यहरू प्राथमिकता